Sarkaal Kenyaati Ah Oo Lagu Dilay Duleedka Degmada Dhoobley. – Bogga Calamada.com
Sarkaal Kenyaati Ah Oo Lagu Dilay Duleedka Degmada Dhoobley.
Qarax culus ayaa saacadihii lasoo dhaafay lala beegsaday kolanyo ka tirsan ciidamada Nasaarada Kenya oo ku socdlaayay wadada isku xirta degmada Dhoobley iyo deegaanka Taabto oo ka wada tirsan gobalka Jubbada hoose.
Qaraxa oo loo adeegsaday miinada dhulka lagu aaso ee meelaha fog laga hago waxey la kacday gaari Taw ah oo uu la socday sarkaalkii watay ciidamadaasi qaraxa lala beegsaday’iyadoona la xaqiijiyay in gaariga Taw-ga ah isla goobta uu ku burburay.
Sidoo kale qaraxa waxaa ku dhintay taliyihii ciidamada watay iyo ku dhawaad 10 ka tirsan ilaaladiisa gaarka ah oo gabi ahaantooda ah Kenyaati’waxeyna kolanyada sidoo kale muddo saacada ah ku hakadeen goobta lagu qarxiyay.
Dhanka kale qarax culus ayaa lala beegsaday kolanyo ka tirsan Nasaarada Kenya oo kasoo baxay degmada Kulbiyow islamarkaana sahay u waday ciidamada Nasaarada Kenya ee ku sugan deegaanka Badhaadhe oo ka wada tirsan gobalka Jubbada hoose.
Qaraxa labaad waxaa lagu gubay gaari Mutabiish ah kaasi oo ahaa gaarigii ay sahayda ku wateen ciidamada Nasaarada Kenya ee qaraxa lagula beegsaday wadada isku xirta Kulbiyow iyo Badhaadhe.
Ciidamada Kenya ayaa si aad ah ugu dhibqaba isugu kala gudbidda degmooyinka iyo deegaanada ay duulaanka kaga suganyihiin gobalka Jubabda hoose.